ဆွီဒင်နဲ့ကစားမယ့် ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲမှာ ဟာရီကိန်း ပါဝင်နိုင်မယ်
ဆွီဒင်နဲ့ကစားမယ့် ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲအတွက် ကြံ့ခိုင်မှုပြည့်ဝနေပြီဖြစ်တဲ့ ဟာရီကိန်း Harry Kane
5 Jul 2018 . 11:33 AM
အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ အဓိကတိုက်စစ်မှူး ဟာရီကိန်း Harry Kane ဟာ အခုစနေနေ့မှာကစားမယ့် ဆွီဒင်နဲ့ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲကျရင် ပါဝင်ကစားဖို့အတွက် ကြံ့ခိုင်မှုပြည့်ဝနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့တုန်းက ကိုလံဘီယာနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ပွဲမှာ ဟာရီကိန်းဟာ ခြေသလုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့် ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲ လွဲချော်မှာကို ပရိသတ်တွေက စိုးရိမ်နေကြတယ်။ အင်္ဂလန်အသင်းဆေးအဖွဲ့က ဟာရီကိန်းရဲ့ဒဏ်ရာကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် သိပ်ပြီးပြင်းထန်မှုမရှိတာကြောင့် ဆွီဒင်နဲ့ပွဲမှာ ဟာရီကိန်း ပါဝင်ကစားနိုင်မယ်လို့ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ဟာရီကိန်းဟာ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမှာ (၆)ဂိုးသွင်းယူထားပြီး သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် ဦးဆောင်နေသူပါ။ အင်္ဂလန်အသင်းတိုက်စစ်မှာ ဟာရီကိန်းရဲ့အခြေအနေက စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ပေမယ့်လည်း တခြားတိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဗာဒီ Vardy ဒဏ်ရာက စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားရှိနေပါတယ်။ ဗာဒီဟာ ကိုလံဘီယာနဲ့ပွဲမှာ ပေါင်ခြံဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဆွီဒင်နဲ့ကစားမယ့်ပွဲအမီ ကြံ့ခိုင်မှုပြည့်ဝလာဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ ကိုလံဘီယာနဲ့ပွဲမှာ ဒဏ်ရာတွေအသီးသီးရခဲ့ကြတဲ့ အက်ရ်ှလေယန်း Ashley Young ၊ ဝေါလ်ကာ Walker တို့ကတော့ ဆွီဒင်နဲ့ပွဲမှာ ပါဝင်ကစားနိုင်မှာပါ။
ဆှီဒငျနဲ့ကစားမယျ့ ကှာတားဖိုငျနယျပှဲအတှကျ ကွံ့ခိုငျမှုပွညျ့ဝနပွေီဖွဈတဲ့ ဟာရီကိနျး Harry Kane
အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ အဓိကတိုကျစဈမှူး ဟာရီကိနျး Harry Kane ဟာ အခုစနနေမှေ့ာကစားမယျ့ ဆှီဒငျနဲ့ကှာတားဖိုငျနယျပှဲကရြငျ ပါဝငျကစားဖို့အတှကျ ကွံ့ခိုငျမှုပွညျ့ဝနပွေီဖွဈပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့အင်ျဂါနတေု့နျးက ကိုလံဘီယာနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ပှဲမှာ ဟာရီကိနျးဟာ ခွသေလုံးဒဏျရာရရှိခဲ့တာကွောငျ့ ကှာတားဖိုငျနယျပှဲ လှဲခြျောမှာကို ပရိသတျတှကေ စိုးရိမျနကွေတယျ။ အင်ျဂလနျအသငျးဆေးအဖှဲ့က ဟာရီကိနျးရဲ့ဒဏျရာကို စမျးသပျစဈဆေးမှုတှလေုပျခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ သိပျပွီးပွငျးထနျမှုမရှိတာကွောငျ့ ဆှီဒငျနဲ့ပှဲမှာ ဟာရီကိနျး ပါဝငျကစားနိုငျမယျလို့ အတညျပွုခဲ့ပါတယျ။
ဟာရီကိနျးဟာ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲမှာ (၆)ဂိုးသှငျးယူထားပွီး သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈ ဦးဆောငျနသေူပါ။ အင်ျဂလနျအသငျးတိုကျစဈမှာ ဟာရီကိနျးရဲ့အခွအေနကေ စိုးရိမျစရာမရှိတော့ပမေယျ့လညျး တခွားတိုကျစဈမှူးတဈဦးဖွဈတဲ့ ဗာဒီ Vardy ဒဏျရာက စိုးရိမျရတဲ့အနအေထားရှိနပေါတယျ။ ဗာဒီဟာ ကိုလံဘီယာနဲ့ပှဲမှာ ပေါငျခွံဒဏျရာရရှိခဲ့တာဖွဈပွီး ဆှီဒငျနဲ့ကစားမယျ့ပှဲအမီ ကွံ့ခိုငျမှုပွညျ့ဝလာဖို့ မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။ ကိုလံဘီယာနဲ့ပှဲမှာ ဒဏျရာတှအေသီးသီးရခဲ့ကွတဲ့ အကျရျှလယေနျး Ashley Young ၊ ဝေါလျကာ Walker တို့ကတော့ ဆှီဒငျနဲ့ပှဲမှာ ပါဝငျကစားနိုငျမှာပါ။
အင်္ဂလန်ကလပ်တွေ အဖွင့်မလှခဲ့ကြတဲ့ အင်္ဂါနေ့ ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဖွင့်ပွဲများ
Herrera ရွာငယ်လေးကနေ အစပြုခဲ့တဲ့ ယူရိုသန်း(၁၀၀)တန် ကြယ်တစ်ပွင့်ရဲ့ ဘ၀ခရီးလမ်း
by Naing Linn . 15 hours ago
Lionel Messi နဲ့ Cristiano Ronaldo တို့ရဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဂိုးတွေကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရအောင်
by Naing Linn . 18 hours ago